Mareykanka iyo Midowga Afrika oo ku baaqay in lasoo nooleeyo dadaallada xabbad-joojinta Itoobiya
Jeffrey Feltman iyo Demeke Mekonnen
Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka ayaa la kulmay Ra'isul Wasaare ku Xigeenka dalka Itoobiya maalintii Khamiista, si ay u soo nooleeyaan wadahadalladii xabbad-joojinta ahaa, iyada oo dowladdu oggolaatay in 369 baabuur oo gargaar ah ay galaan gobolka Tigray ee ay abaaruhu ku dhufteen.
Feltman ayaa markii dambe la kulmay Ra'iisul Wasaare ku Xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen.
"Intii lagu jiray wadahadalkooda, Demeke wuxuu shaaca ka qaaday in duullimaadyada bini'aadantinimo loo oggolyahay Lalibela iyo Kombolcha, waxaana intaas dheer in 369 baabuur oo gargaar ah loo oggolaaday inay galaan Tigray," ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay Twitterka waaxda agaasinka warfaafinta ee dowladda Itoobiya.
Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay maamulaan Lalibela iyo Kombolcha oo ka tirsan dhulka Axmaarada, sidoo kale waxay u dhaqaaqeen qaybo ka mid ah gobolka Canfarta.
Ku dhawaad 400,000 oo qof ayaa la rumeysan yahay inay ku nool yihiin xaalad macaluul ah gobolka Tigray, halkaas oo Qaramada Midoobay ay Khamiistii sheegtay inay awoodi waysay inay cunto geyso muddo bil ah.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in inta badan hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ee halkaas ku sugan ay hayso nafaqo-darro ba'an.
Dowladda ayaa beenisay eedeymaha uga yimid saraakiisha Qaramada Midoobay ee ah in ay wado go’doomin dhab ah.
Hogaamiyayaasha xisbiga Tigray People’s Liberation Front (TPLF) ayaa doonaya in ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu xilka ka dago, gargaar bini’aadantina uu galo Tigrayga. Dawladdu waxay doonaysaa in ciidamada Tigreega ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada deriska la ah.